Madaxweyne Farmaajo oo Dhagax-dhigay Xarunta Dhaqanka Soomaaliyeed[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo Dhagax-dhigay Xarunta Dhaqanka Soomaaliyeed[Sawirro]
QARDHO – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo habeenkii xalay u hoyday magaalada Qardho ayaa si rasmi ah u dhagax-dhigay xarunta dhaqanka Soomaaliyeed taasoo laga dhisayo magaalada Qardho.
Madaxweyne Farmaajo waxa ku weheliyay munaasabada dhagax-dhiga Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Boqor Burhaan Boqor Muuse oo martigeliyay Waftiga Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bixiyay dhulka laga dhisaayo xarunta dhaqanka Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay musaabada dhagax-dhigga ayaa sheegay in magaalada Qardho ay tahay xarun ku caan ah dhaqanka Soomaaliya,sidaas darteedna loo doortay in laga dhiso xarunta lagu keydiyo oo laga heli karo dhammaan dhaqanka Soomaaliya.
Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa dhankiisa uga mahadceliyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booqashada uu ku yimid Puntland.
Sidoo kale waxa uu uga mahadceliyay in uu si rasmi ah u dhagax-dhigay xarunta dhaqanka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalintii Arbacada soo gaaray magaalada Qardho ayaa munaasabadii dhagax-dhigga ka sheegay in tani tahay dhagax-dhiggii labaad uu sameeyay kaddib kii Jaamacadda Ummada.
Waxa uu ballanqaaday Madaxweynuhu in dowladiisu xil iska saari doonto taabo-gelinta iyo dhismaha xarunta dhaqanka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale Boqor Burhaan ku ammaanay sida uu xilka isaga saaro ilaalinta dhaqanka iyo qiyamka Ummadda Soomaaliyeed.
Dhagax-dhigga kaddib ayaa Madaxweyne Farmaajo waxa uu safar dhanka dhulka ah ugu baxay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.